Indlela yokujongana namalungu osapho angakuhoyiyo - Okunye
Indlela yokujongana namalungu osapho angakuhoyiyo
Ukungahoywa lilungu elinye okanye nangaphezulu losapho kunokuziva kubuhlungu kwaye kuphazamisile. Ngelixa ungasokuze uqonde ngokupheleleyo ukuba kutheni bengakuhoyi, zikho iindlela onokuzikhusela ngazo impilo yakho yeemvakalelo.
Xa Usapho Lukutyeshele
Xa ilungu losapho lingahoyi, oko kungakhokelela ekubeni uzibuze kwaye uzibuze ukuba unephutha na. Le mpendulo iqheleke ngokupheleleyo kolu hlobo lweemeko, njengoko uninzi lwabantu ngokwendalo lutyekele ekufuneni ukuvalwa nokunciphisa uxinzelelo lweemvakalelo. Emva kokungahoywa kwisiseko esibuhlungu okanye esinganyangekiyo, unokufumana:
uvuthwa njani iitumato eziluhlaza ngaphandle komdiliya
Ndiziva ndibuhlungu kwaye ndididekile
Ukunyamezela nokuzithemba ngaphezulu kwesi siganeko (s) apho ungakhathalelwanga
Ukufumana ukuzithemba okuphantsi
Amavaiimpawu zoxinzelelokunye / okanye uxinzelelo
Ukufumana iimpawu zokondla / zokutya
Ukufumana iimpawu zokuphazamiseka okwenzekileyo
Ukujongana namalungu osapho anekhwele ngokufanelekileyo
Kutheni Intsapho Yam Indithiye?
Njengomntu omdala, unokufuna ngokungazi ukuba ufune amaqabane angenampilo okanye izihlobo ezingazibeki phambili iimfuno zakho, zikushiye, zingakuhoyi, okanye zingathembeki. Thatha ixesha ukubonisa ukuba ngaba le yipatheni okhe waqubisana nayo ngaphandle kosapho lwakho ngaphambili.
Amalungu oSapho aKhethe kwaye aakuKhathalela
Ukukhutshelwa ngaphandle lilungu losapho ngesihlandlo esinye okanye ngaphezulu kunokuziva kudinisa, kukhathaza ixhala, kwaye kuphazamisa ukujongana nako. Ukukhutshelwa ngaphandle yenye indlela yokungahoywa kwaye kunokukwenza uzive ngathi awungowasapho lwakho. Ezinye iindlela zokukhutshelwa ngaphandle zibandakanya xa usapho luhluza ilungu elinye losapho phandle okanye ngokuzithemba, lishiya umntu omnye ngaphandle kwemisebenzi yosapho, kwaye engaphenduli kwilungu elinye losapho. Nokuba wenasukuvana nosapho lwakhoUkuziva ngathi ulilizwe kusenokuba buhlungu kakhulu. Ukuba kuyenzeka:
Thetha nelungu losapho elingakuhoyiyo, ukuba uziva ukhuselekile ngokwasemphefumlweni nasemzimbeni ngokwenza njalo, kwaye uthethe ngendlela ethembekileyo nengathathi cala. Umzekelo, unokuthi, 'Kumsitho) ndaziva ndingakhathalelwanga xa ungandiphendulanga xa ndibuza malunga (faka ingxelo). Ndiyazibuza ukuba ungaziva ukhululekile na ukwabelana ngeembono zakho. '
Cwangcisa kwayegcina imida esempilweni. Amaxesha amaninzi abo bahlala kumakhaya kunye, okanye abanxibelelana rhoqo naboamalungu osapho angasebenzi kakuhlekusenokuba nzima ukuqonda imida esempilweni nefanelekileyo kuba kwakungekho mzekelo mhle wokukhula.
Zifundise ngeendlela zokuphathwa gadalala ngokweemvakalelo ukuze uqonde ngcono ukuba yintoni eyenza ukuba umntu aphathe gadalala, kunye nefuthe lolu hlobo lokuxhatshazwa elinokuba nalo kwabo balufumanayo. Yazi ukuba abanye abantu abaziphatha ngeendlela ezihlukumezayo abazenzi ngabom, kodwa endaweni yoko bafunde le patheni yokuziphatha ebuntwaneni kwaye abanokucinga ukuba benza nantoni na eyenzakalisayo.
Uhlangabezana njani nelungu losapho elilawulayo?
Ukungahoyi umntu yindlela enamandla yokulawula nokuphatha. Ukuba ilungu losapho lwakho likhethe ukusebenzisa ukukuvalela ngaphandle njengendlela yokufikelela kumandla nolawulo, yazi ukuba zikho iindlela ezimbalwa onokuthi uhambe ngazo ngokuphatha le meko. Gcina ukhumbula ukuba:
Ayilotyala lakho eli, kwaye awunaxanduva lokuziphatha komnye umntwana kunye nokuziphatha okubi. Qhubeka uzikhumbuze ukuba ukulawula indlela abaziphethe ngayo kuxhomekeke kubo, kwaye ayenziwa ngenxa yakho.
Amaxesha amaninzi abo bangakhathalelwanga njengabantwana bakhula beyiphinda le patheni kwaye bayayishiya, bayayihoya, kwaye ngenjongo bashiye abanye. Ngelixa kubuhlungu ukuba ukwisiphelo sokuziphatha, yazi ukuba ukungahoywa amaxesha ngamaxesha akunakuba nanto yakwenza nawe, kodwa endaweni yoko ngumntu ongazi nto ngokusebenza ngengozi yobuntwana ngendlela engenampilo.
Ilungu losapho linokungahoyi njengeprojekti, oko kuthetha ukuba xa baziva bevuselelekile, banokuthi baveze iimvakalelo zabo ezisengozini kuwe, endaweni yokujongana nabo bebodwa. Umzekelo, banokukubeka ityala, kwaye bathi yimpazamo yakho ukuziva ungakhathalelwanga, njengendlela yokuphepha iimvakalelo zabo zokungahoywa. Oku kunokubangelwa yimeko ebangela ukuba ungazi.
Nokuba lilungu losapho elingakuhoyiyo kwinqanaba lokuqonda okanye elingazi nto, ayenzi le ndlela yokuziphatha yamkeleke, ifaneleke, okanye isempilweni.
Xa usapho lukutyeshela kuFacebook
Ukuba ilungu losapho alikuhoyi kwimidiya yoluntu, cinga malunga nokuba kufanelekile ukuba uchithe amandla akho uzikhathaza ngokuba kutheni, okanye uzama ukubandakanyeka nawo ukuze uqonde umbono wabo. Zibuze ukuba kutheni le nto ikukhathaza, ikukhathaze, okanye ikwenze uzive unomsindo. Cinga malunga nokuba abakuhoyi sisenzo esinenjongo okanye ingozi. Ukuba uyafuna ukuthatha inyathelo:
Buza ilungu losapho lwakho ukuba bayafumaneka na ukuze bathethe nawe kwaye babelane ngeemvakalelo zakho ngendlela emfutshane nethembekileyo ngaphandle kokubeka ityala. Umzekelo, 'ndiyazibuza ukuba ubunaxesha lokuncokola kamva nam.' Ukuba bayavuma, ungathi, 'Bendifuna ukuthetha nawe kuFacebook, kodwa kubonakala ngathi ndithintelwe.'
Ukuba bayaqhubeka nokungahoyi kwaye baziva benenjongo, okanye banembali yokungakuhoyi, buyisela ulawulo lwakho kwaye usete eyakho imida. Yazi ukuba awukho kwimeko yabo, kwaye kufanelekile ukuba udibane nabantu abasempilweni abaya kukuhlonipha kwaye bathathe inxaxheba kunxibelelwano olufanelekileyo nolusempilweni nawe.
Ukuba ilungu losapho lwakho likubhloka kwimidiya yoluntu ngaphandle kwesizathu, zama ukuyila kwakhona imeko. Nangona inokuzisa impendulo ngaphakathi kuwe, inokuba sisipho kwiphepha elimdaka xa umntu ongenampilo, kunye / okanye umntu ophethe gadalala anciphisa unxibelelwano lwabo nawe.
Uyiphatha Njani Usapho Olunetyhefu Ongazinanziyo Iintswelo Zakho?
Ukuba uhlala kwikhaya elinosapho olungasebenzi kakuhle, kwaye umncinci, yazi ukuba umntu okhathalelayo okanye umzali ongazinanziyo iimfuno zakho, kwaye / okanye ongaphumeleliyo ukuphendula iimpendulo zakho ezizodwa zeemvakalelo unokuthathwa njengohlobo lokungahoyi kunye / okanye ukuxhatshazwa ngokweemvakalelo kuxhomekeke kwiimeko ezithile. Njengomncinci unga:
Xela uxhatshazo kwiiNkonzo zoKhuselo lwaBantwana. Gcina ukhumbula ukuba ukuxhatshazwa ngokwasemphefumlweni ngaphandle kokuphathwa gadalala ngokwasemzimbeni kunye / okanye ukungahoywa okuqatha (ukunqongophala kokutya, impahla, indawo yokuhlala) akunakulindeleka ukuba kukhokelele ekususweni kwakho ekhayeni kwaye umntu othile angaqhakamshelana nalowo umkhathaleleyo ukuba enze uvavanyo. Cinga ngokuthetha nomntu omdala omthembileyo ngaphambi kokuba uthathe eli nyathelo, njengoko ukwenza njalo kunokubangela ukwanda kobutshaba ekhaya.
Misela imida yeemvakalelo kwaye uzame ukuzikhusela kangangoko unako kude ube uyakwazi ukushiya ikhaya ulunge. Thatha ixesha lokucinga malunga neemeko zangaphambili apho uzive ungahoywanga kwaye uzilungiselele iimeko ezizayo.
Qhubeka nokwakha izixhobo zangaphakathi. Zikhumbuze ukuba uyakufanelekela ukuthandwa, iimvakalelo zakho zisemthethweni, kwaye kufanelekile ukuba wamkelwe. Nokuba lo mntu lilungu losapho oko akuthethi ukuba basempilweni, kwaye oko akuthethi ukuba bangumfanekiso ochanekileyo wakho.
Indlela yokujongana namalungu osapho angakuhloniphiyo
Xa ilungu losapho lukuhoya, oko kungakhokelela ekubeni uzive ungahlonitshwa ngokunzulu. Ingumbono olungileyo ukuziqhelanisa nokungafuni ngenkuthalo ukuqinisekiswa kwamalungu osapho aniphatha kakubi kwaye asebenze ekuhlakuleleni uhlobo lwenu lokuzithanda, ukuzihlonipha, kunye nokuqinisekiswa kwangaphakathi. Nciphisa ukusebenzisana kwakho nelungu elithile losapho ukuba kunokwenzeka, sebenzela ekuqapheleni xa bezama ukudala uxinzelelo lweemvakalelo ngaphakathi kwakho (ukuxhatshazwa ngokweemvakalelo), kwaye wenze konke okusemandleni akho ukuba ungazibandakanyi nabo kwinqanaba labo. Ukulandela unxibelelwano olubi nabo, ziqhelise ukuphindaphinda iimantra ezikukhumbuza ukuba:
Ufanele ukufumana amavaubudlelwane obuphilileyongonxibelelwano oluvulekileyo, ukuthembana, ukuthembeka, kunye nemida efanelekileyo
Kutheni Intsapho Yam Ingandihoyi?
Inye okanye nangaphezuluAmalungu osapho anokungahoyi ngenxa yezizathu ezininzi. Gcina ukhumbula, nokuba siphi na isizathu sabo sangaphandle sokungakuhoyi, ngesiqhelo kukho iindlela ezininzi ezingekho sempilweni kunye nokungazi nto phantsi komhlaba ezikhuthaza indlela abaziphethe ngayo abangenakulindela ukuba bazi. Ezinye zibandakanya:
Ipatheni yokuncamathiselwa okungenampilo
Ukuqikelelwa kokuziva ungabonakali kwaye ungakhathalelwanga
Indlela yokukukhohlisa kunye nokwenza impendulo yoxinzelelo ngaphakathi kwakho
Yazi nokuba wenze into ongazidli ngayo ngeli lungu losapho, awufanelanga ukungahoywa. Ukungahoyi umntu kukusabela okungakhawuleziyo kunye nendlela yokuziphatha eguqukayo onokuthi ubone abantwana bengena kuyo njengesixhobo sokubonisa iimvakalelo abangenalo ulwimi lwabo. Abantu abadala abakhetha ukungahoyi abanye ngenxa yoko abazibandakanyi nawe njengabantu abadala, kodwa endaweni yoko babuyela emva kwiminyaka yabo yobuntwana. Gcina oku engqondweni xa ilungu losapho lwakho libonakala ngathi livuselelekile kwaye liqala ukukhuphela ngaphandle okanye ukukuhoya.
Funa Uncedo xa ungakhathalelwanga lusapho
Ukungahoywa lilungu losapho kunokuba ngamava abuhlungu kakhulu. Yazi ukuba ngaphandle kwesizathu sokuba kutheni, awufanelanga kuhoywa. Ukuba ufumana ubunzima ngokuzithemba, unxunguphalo, uxinzelelo, ukulala okanye imiba enxulumene nokutya, okanye uxinzelelo ngokubanzi, qiniseka ukufikelela kugqirha okanye umcebisi onokuthi akuncede usebenze kule meko inzima, ngelixa ukukunceda ukwandisa ukomelela kwakho.
Uthethathethwano Ring Basics Abafazi Izihlangu Iindidi E Yoga Ukujamelana With Grief Ukuzilolonga Iividiyo Kunye Nomculo
kutheni imithi enqabileyo ilahla amagqabi ekwindla?
umyeni wam wasweleka ngesiquphe engalindelanga
beka ubuso bakho kumzimba wokudanisa simahla
ukubaluleka kweenqobo ezisesikweni kushishino
imisebenzi eqesha abaneminyaka eli-13 ubudala